पीसीआर रिर्पोटका लागि २२ दिनसम्म कुर्नुपर्दा तनाव – Dainik Lumbini
विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरसले यतिबेला विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको छ । नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिकजसो बढ्दै गएको छ । महामारी नियन्त्रणका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरि तिनै तहका सरकारहरू दौडधुपमा लागिरहेका छन् । तै पनि भाइरस नियन्त्रणका कार्यक्रमहरूले प्रभावकारी रूप लिन नसकेको जनगुनासाहरू आउन थालेका छन् । यसैबीच प्यूठान जिल्लाको स्वर्गद्धारी नगरपालिकाले महामारी नियन्त्रणका लागि विभिन्न कदम चालिरहेको छ । महामारीमा पनि नगरपालिकाले नियमित गतिविधि अगाडि बढाइरहेको देखिन्छ । पालिका भित्र कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन के–कसरी भइरहेको छ, साथै अगाडिका योजनाहरू के–कस्ता छन् भन्ने विषयमा स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका नगरप्रमुख नेत्रबहादुर रोका क्षेत्रीसंग दैनिक लुम्बिनीका जिल्ला संवाददाता राधिका भुसालले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।
स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका कोरोना संक्रमित तथा जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?
भारतमा बस्दै आएका नगरवासी नागरिकलाई सुरक्षित उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि सर्वप्रथम नगर कार्यपालिकाको बैठकले सबैको उचित रायअनुसार काम गर्ने निर्णय गरेको थियो । नगरक्षेत्र भित्रमा ५३ वटै विद्यालय छन् ९ वटै वडाहरूले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित राख्नका लागि ति विद्यालयमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्ने कार्यपालिकाले निर्णय ग¥यो र सोहीअनुसार अगाडि बढ्यो । अहिले ३९ वटा क्वारेन्टाइनमा भारत लगायत विभिन्न ठाउँबाट आउनु भएका करिब १३ सय नागरिक बस्नु भएको छ । उहाँहरूलाई हामीले केही सुविधा दिन सकिरहेका छैनौ, प्रति व्यक्तिका दरले दुई सय ५० रुपैयाँको व्यवस्था गरेर त्यहीँ बजेटमा मेश सञ्चालन गरेका छौं । क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूलाई दैनिक बिहान चिया नास्ता, बिहानको खाना, दिउँसो चिया नास्ता र साँझको खाना व्यवस्था गरेका छौं भने कसैले घरबाट खाना लिएर पनि खाने गर्नु भएको छ । क्वारेन्टाइनमा बसेको १४ दिन पुगेपछि आरडीटी परीक्षण गरेर पुनः एक हप्ता होमक्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी घरमा पठाउने गरेका छौं । आरडीटी खासै भरपर्दो छैन भन्ने हल्ला सुनिरहँुदा पनि पीसीआरको अभावका कारण आरडीटी नै बढी परीक्षण भएको छ । हाल बाह्य मुलुकबाट आएका नगरवासीहरू एक हजार तीन सय ८३ जनाको आरडीटी परीक्षण, एक सय ५० जनाको पीसीआर परिक्षण गरे पनि २० जनाको मात्रै रिर्पोट आएको छ । दुर्भाग्य रिर्पोट आउन ढिलो भएकोले आर्थिक चाप बढ्नुका साथै अवधि पूरा भएर पनि आफ्नो घरमा जान नपाउँदा नागरिकहरूले निकै गुनासो गर्नु भएको छ । एउटा पीसीआर किटलाई तीन सय ३९ रुपैयाँमा खरिद गरेर काम चलाएका छौं भने आरडीटी किट जिल्लाले उपलब्ध गराएको छ । जुन व्यक्तिको आरडीटी पोजेटिभ आएको छ, ति व्यक्तिहरूको पीसीआर परीक्षण गर्ने गरेका छौं ।
कोरोना संक्रमितहरूको मनोबल कसरी बढाउने गर्नु भएको छ ?
नगरमा हालसम्म ७ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । ति सबैजनाको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छ । दुई जना डाक्टरलाई संक्रमितहरूको उपचारमा खटाएका छौं । सूचना प्रविधि पार्क जिमुरपाटामा २३ बेडको सुविधायुक्त व्यवस्थित आइसोलेसन तयार गरेका छौं । कोरोना पोजेटिभ भएका व्यक्तिहरूको मनोबल उच्च बनाउनका लागि पोष्णयुक्त खाना, व्यायम, मनोरञ्जनका सामग्री, इन्टरनेट, टेलिभिजनको सुविधा, नियमित भेटघाट जस्ता कुरामा ध्यान दिइएको छ । म आफै आइसोलेसन अवलोकन गर्ने गरेको छु । यस्ता कुरामा सुरुवातीदेखि नै विशेष ध्यान दिएको छु । तर, पीसीआर रिर्पोट ढिलो आउने भएकोले नगरपालिकालाई आर्थिक भार थपिएको छ भने आरडीटी भरपर्दो छैन भन्ने कुराले कतै हामीले रोग फैलाएका त छैनौं भन्ने डर पनि छ । २२ दिनसम्म पनि पीसीआर रिर्पोट नआउँदा निकै तनाव समेत झेल्नु परेको छ ।
आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीहरू पनि हामीले खरिद गरेका छौं र हाल अभाव छैन । पारदर्शी तरिकाले छनौट गरेर ९ वटा वडामा दुई चरणमा तीन सय ८३ घरपारिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले कति बजेट खर्च गरेको छ ?
हालसम्म नगरपालिकाको विकास बजेटबाट ८५ लाख खर्च भएको छ । सुरुमा राहत वितरणदेखि क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, खाद्यन्न, अलपत्रमा स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री खरिद, स्वास्थ्य परिक्षणका सामग्री खरिदलगायतका क्षेत्रमा बढी खर्च भएको छ । जोखिममा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई केही दिएको छैन उनीहरूको कामको विशेष मूल्यांकन गर्ने र पारिश्रमिक पनि दिने हो भने ७५ लाख मोटामोटी हिसाब आएको छ । क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको खानपिनमा मात्रै करिब ३९ लाख खर्च भएको छ । अmभैm कति हुने हो कुनै एकिन छैन । किन भने करिब १२ हजार नगरवासी नागरिकहरू रोजगारीको शिलशिलमा भारत जानु भएको छ आउने क्रम जारी छ । सहयोगी निकायहरू नगरपालिकासंग समन्वय गरी सहयोग गर्न आग्रह गरेर एकद्धार प्रणालीबाट गएका छौं ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि नगर क्षेत्रका कुन–कुन निकायले कसरी सहयोग गरेका छन् ?
यो माहामारी कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको पहलमा निवारण हुने होइन । सबै तिरको सक्रियता, सजकता र सहयोग अत्यन्तै आवश्यक परिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा कोरोना नियन्यन्त्रणका लागि ठेकेदार, संघसंस्था, सहकारी, विदेशमा रहेका यहाँका दाजुभाइहरूले पनि सहयोग गर्नु भएको छ । जसले जे–जस्तो खालको सहयोग गर्न सक्नु भएको छ त्यहीअनुसार सहयोग पाइरहेका छौं । अझै सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासमा छौं । नेकपाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमले सुरुमा सेनिटाइजर, सावुन उपलब्ध गराउनु भयो भने अहिले फेरि नगरपालिकाका ९ वटै वडालाई एक–एक हजार थान मास्क, नगरपालिकालाई पाँच सय थान मास्क सहयोग आएको छ । त्यस्तै नेकपाले नगद र खाद्यन्न गरी ८१ हजार सहयोग गरेको छ भने अन्य दलहरूले २५–३० हजारको दरले सहयोग गरेका छन् ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि आगामी योजना के–कस्तो छ ?
पहिले त म स्वर्गद्वारी प्रभु महाराजसंग प्रार्थना गर्छु । हामीलाई संक्रमितको संख्या नबढाइयोस् । किन भने हाम्रो नगरपालिका विपन्न छ । यहाँका नागरिकहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर छ रोजगार छैन । यदि संक्रमितको संख्या बढी हाल्यो भने पहिले बाँचौं अनि बाँचेपछि विकास गरौंला भन्ने योजना छ । कोरोनाका लागि लडिरहेका छौं अझै लड्नलाई हामी तयारी अवस्थामा छौं ।
यस आर्थिक वर्षको अन्त्यमा के–कस्ता योजना पूरा हुँदैछन् ?
अब यो योजनाको सम्बन्धका अघिल्लो महिनामै ४५ प्रतिशत योजनाको काम सम्पन्न भएर भुक्तानी पनि लगिसकेका छन् । एउटा ठुलो खानेपानीका योजना थियो त्यसको काम के–कति भयो भनेर अनुगमन गरेका छैनौ किन भने हामीसंग भुक्तानी दिन पैसा पनि छैन । पाँच करोड घाटा बजेट छ त्यसले गर्दा केही योजनाहरूको काम नहुने निश्चित छ । प्रत्येक वडालाई २०–२० लाख रकम विनियोजन गरि एक वडा एक नमूना सडक बनाउने लक्ष्य पनि पूरा भएको छ । अन्य वडाको काम सम्पन्न भएर भुक्तानी पनि लगिसकेका छन् ८ नं. वडाको काम सम्पन्न भएको छ भुक्तानी दिन बाँकी छ भने ६ नं. वडाको काम नै सुचारू नभएको हुँदा बजेट फ्रिज हुने सम्भावना छ ।
अन्त्यमा नगरवासीहरूलाई केही भन्नु छ कि ?
उपस्थितिलाई बुझ्न सकिएन भने गन्तव्यमा पुग्न सकिंदैन । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस जित्नका लागि एउटा मेयरले मात्रै केही गर्न सक्दैन । सबै नगरवासीहरू अनुशासीत भएर यस भाइरससंग संर्घष गर्न आग्रह गर्दछु । धन्यवाद !
पार्टी र व्यापारिक पत्रकारिता हावी भयो - मदनलाल पौडेल (अन्तर्वार्ता)